Bogga ugu weyn / accessories / Qalabka Fudeetada / WOWOW Tuubada isku xira tubbo Lab Dheddig
isku xireyaasha tubada biyaha tubada waa fududahay in la rakibo waxaana si fudud u maamuli kara hal qof. Fure-ka-ku-dhiska-ka-dhiska waa adag yahay oo ma fududa in la edbiyo.
Qoraalka xariijinta toosan ee shaashadda biyaha:
Ku habboon tuubada weelka iyo qasabadda jikada, labadaba biyo kulul & qabow adoo adeegsanaya.
Khadadka tucai shahaadaysan: dusha sare ee looxaanta, naxaasta gudaha, PX tuubada naxaasta ah, naxaas adag oo isku xira.
Cabbirka US Standard: M10 * 1, 9/16, 500 mm / 19.7 inch oo dherer ah, 11 mm dhexroor isku xira, si fiican u xirxiraya si adag si loo hubiyo tayada
Rakibaadda Fudud: isku xira naxaas adag, fududahay in lagu rakibo gacanta ama biinanka daqiiqad.
GARGAAR 5-Sano AH, ADEEGA Macaamiil: 5-sano oo dammaanad ah iyo taageero macaamiil ayaa la siiyaa. Waxaa daboolay 90-maalmood oo lacag la’aan ah.
FADLAN LA XIRIIR EMAIL❤service@wowowfaucet.com
Tayada runti aad ayey ufiican tahay, midabku waa nadiif yahay oo qurux badan yahay, muuqaalka muuqaalku waa ku habboon yahay, baakadkuna waa jawiga. Qulqulayaashu waa siman yihiin, aad u dhumuc weyn, farshaxanimo wanaagsan, oo aan lahayn wax bur bur ah, qurxin fiican, naqshad yar iyo qurux badan, naqshaduna aad ayey u wanaagsan tahay Farshaxanku wuxuu umuuqdaa mid heerkiisu sareeyo. Furka daboolka ayaa leh qalab kor loo qaado, kaas oo si gaar ah ugu habboon in la rakibo. Waa la adkeyn karaa iyada oo aan lahayn wrist, oo ah mid aad u saaxiibtinimo leh!
Tuubbooyinka tuubada jikada guud ahaan waxay ubaahanyihiin inay marka hore qolka tuubada ku xiraan suuf boodhadh ah, ka daadi godka qabow ee biyaha ka imanaya dusheeda ilaa iyo hoose, ka dibna u adeegso olol dabacsan si loogu xiro tuubada qasabada hoose ee tubbada tubada iyo saacadba saac. Xiriirku waa adag yahay oo adag, ka dibna ku riix dhamaadka tuubada saacad dhanka saacadaha u xiriyaha xagga hoose ee tubbada.
SKU: X1004 Categories: Qalabka Fudeetada, accessories Tags: Isku xiraha Fure, Tuubada isku xiraha tubada, Tubbo tubbada
Madaxa Wareejinta Beddelka WOWOW ee jikada jikada ...
Qolka musqusha ee Wowaw Vessel Vanity Sink Pop up ...
La iibiyey: 34